ALAHADY 22 MANDAVANTAONA TAONA D - Fihirana Katolika Malagasy
ALAHADY 22 MANDAVANTAONA TAONA D
Daty : 29/08/2010
“Izay manetry tena no hasandratra.”
Lalana mankamin’ny fahamboniana araka izany ny fanetren-tena. Lalana mitondra mankamin’ny voninahitra. Mba hahazoantsika tsara ny fampianaran’ny Evanjely androany dia tsara ny manoritroritra ny fampianaran’i Jesoa, mampiditra indrindra ny maha-sarobidy ny Famindrampon’Andriamanitra. Alahady roa lasa izay, nilaza tamintsika ny faniriany ny hirehetan’ny afom-pitiavany izy (Lk 12 voadingana satria nankalaza ny 15 aogositra isika ), afo izay manery antsika hiditra amin’ny varavarana ety (Lk 13). Izy no varavarana, Izy no lalana mitondra antsika ho amin’ny famonjena. Miara-monina amintsika Izy, miara-misakafo amintsika ka mandinika ny ataontsika.
Ny katesizin'ny Fiangonana Katolika (KKK 2540) dia mampahatsiahy antsika ny toritenin'i Md Jean Chrysostome fa raha te hizotra amin'ny fanetren-tena isika dia aoka hiezaka hifaly amin'ny fahombiazana sy ny fivoaran'ny hafa, satria fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany, hahatsapana ny famindram-pony, tsy ho antsika ihany fa ho an'ny hafa ihany koa. Tsy mahagaga ary raha amafisin'ny Katesizy ny voalazan'ny vakiteny voalohany anio: ny mpanetry tena no hanome voninahitra an'Andriamanitra satria fototry ny fivavahana ny fanetren-tena (KKK2559).
Ny mahalasa ny saiko fotsiny dia hoe: oviana no mba hisy fanasàna evanjelika, amin'ny fanamasinana eveka na pretra na voadin-drelijiozy na mariazy ka tsy hanàsa ny havana sy ny fianakaviana isika, araka ny atoron'ny evanjely, fa hanasa ireo mahantra tsy manan-kavaly! Sao mba diso filaza i Kristy! Asa lahy...
 Ny Evanjely androany moa voalaza fa Lioka 14, 1.7-14 nefa ny ao amin’ny boky vakiteny nijanona amin’ny and.11. Tsy hita ao amin’ny boky vakiteny araka izany ny and. 12-14 ary mety tsy voavaky ao am-piangonana
< Ny Andron'ny Tompo
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0793 s.] - Hanohana anay